Furry मित्र susceptible मानिसहरू भन्दा अक्सर hepatitis। तिनीहरूले यो कलेजो रोग हो, छ। कहिलेकाहीं पुरानो र तीव्र hepatitis बिरालोहरु। रोग अक्सर gastritis, गर्भावस्था को समयमा विषाक्तता को विभिन्न प्रकार, toxicosis, र धेरै को पृष्ठभूमिमा विकसित संक्रामक रोगहरु।
रोग को पहिलो संकेत
नतिजा gastroenteritis, ड्रग्स, विषाक्तता वा घटिया उत्पादनहरु को किरा गर्न विषालु संग लामो समयसम्म उपचार जिगर कक्षहरूको विघटन सक्छ। होस्ट पहिलो कल गर्ने श्लेम लाग्एको को रंग मा परिवर्तन हुनुपर्छ। कलेजो hepatitis बिरालोहरु मा जिब्रो र मुखले jaundiced बन्न भन्ने तथ्यलाई द्वारा विशेषता छ। सामान्यतया कोमल पशु उहाँले विशेष गरी जब ठाउँ चोट, stroked गर्दा फिक्री हुन सक्छ जहाँ कलेजो।
उल्टी, पखाला, वजन तीव्र हानि रोग तस्बिर पूरक गर्न सक्नुहुन्छ। पाल्तु जनावर तुरुन्त डाक्टर हेर्नुपर्छ। तपाईं आत्म-व्यवहार रोग छैन गर्नुपर्छ। सही नकारात्मक प्रभाव जोगिन मदत गर्न उपचार निर्धारित। Hepatitis एक बिरालो - एक वाक्य छैन। को पशु चिकित्सा क्लिनिक एक निदान को आधारमा विश्लेषण गर्न र उपयुक्त उपचार व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
किन कलेजो - एउटा महत्त्वपूर्ण अंग?
पाचन र circulatory प्रणाली बीच लिंक - कलेजो।
यो खाना पाचन लागि bile खेल्छ।
जिगर को चयापचय regulates। सबै शरीर लागि कुरा को प्रकारका। हर्मोन पृष्ठभूमि मनिटर।
ग्लूकोज स्तर Normalizes।
बिष र प्रदूषण देखि संलग्न रगत शुद्धीकरण।
यो आफ्नो कक्षहरू दान द्वारा संक्रमण बाट शरीर बचाउँछ।
बिरालोहरु मा संक्रामक hepatitis
रोग यस प्रकारको सबैभन्दा अक्सर कलेजो असर गर्छ। Hepatitis एक स्वतन्त्र रोग हुन सक्छ। कुनै पनि मामला मा, बिरालो मा रही, भाइरस वा जीवाणु जिगर यसको सफाई समारोह संग अंग एक प्रमुख खतरा मान्छ रूपमा प्रहार। अक्सर भाइरल hepatitis जनावर खुलेर सडकमा रोमिङ उजागर। तिनीहरूले अन्य बिरालोहरु र बिरालोहरु संग वा गरिब गुणस्तर खाना खाने द्वारा कुराकानी गर्न सक्छन् जीवाणुहरू पकड।
गैर-संक्रामक hepatitis: कारण
यो रोग को कारण थप विविध छन्। एक प्रकार एक गैर-संक्रामक छ पुरानो hepatitis बिरालोहरु मा। जनावर को शरीर प्रवेश कि बिष र toxins, रोग को यो फारम कारण।
खाद्य विषाक्तता अक्सर रोग को मुख्य कारण हो। बिरालोहरु बानी एकैचोटि सारा ब्याच अप खान छैन भन्ने तथ्यलाई गर्न सक्छ कि कप podkisnet र कारण विषाक्तता मा खाना। बिरालोहरु-Mouser विष एक मुसा विष पकड गर्न सक्नुहुन्छ। केही अवस्थामा, बलियो आर्सेनिक विषाक्तता प्राप्त गर्न पर्याप्त खतरा संग पनि slightest सम्पर्क। प्रेम houseplants लागि पाल्तु जनावर ठूलो समस्या परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। जनावर सजिलै प्राप्त एक विषालु पात खाने द्वारा विष गर्न सक्नुहुन्छ। मालिकहरूले घर बिरुवाहरु फ्लफी पाल्तु जनावर हानि गर्न सक्छ कि लागि चरण सेट, सावधान हुन आवश्यक छ। बिरालोहरु केही मालिक आफैलाई नम्र रोग उपचार गर्न प्रयास गर्नुहोस्। यो dosing पालन गर्दैन वा बस मानिसहरूलाई जनावर लागूपदार्थ दिनुहोस्। यस्तो प्रेम राम्रो भन्दा टाढा थप हानि पुऱ्याउन सक्छ। हामी शरीर पाल्तु जनावर मानव देखि धेरै फरक छ कि सम्झना गर्नुपर्छ। र मालिक के मद्दत गर्छ, बिरालो मार्न सक्नुहुन्छ।
गैर-संक्रामक hepatitis अन्य कारणहरू
जनावरको गर्न सक्छन् विषाक्तता र विषाक्त वाफ inhaling प्राप्त गर्नुहोस्। घरमा मरम्मत वा गरिरहेको baiting कीराहरू देखि, यो पाल्तु जनावर अलग गर्न आवश्यक छ। inhaled रंग वाष्पीकरण हुनत, बिरालो hepatitis संग keepeth थिएन, तर यो असल केही हुँदैन।
किन hepatitis छ एक बिरालो? परजीवी अक्सर noninfectious रोग प्रकार को कारण हो। तिनीहरूले विनियोजन बर्बाद उत्पादनहरु मार्फत यसलाई प्रभावित, जिगर कक्षहरू नष्ट। साथै, क्षतिग्रस्त शरीर अन्य संक्रमण र भाइरस थप susceptible बन्नेछ।
बिरालोहरु मा hepatitis: लक्षण र उपचार
बिरालोहरु hepatitis देख्न रूपमा? निम्नानुसार यो लक्षण हो:
पहेंलो प्रोटीन आँखा र मौखिक गुहा को श्लेम लाग्एको झिल्ली।
भाइरल फारम समयमा शरीर तापमान बढ्छ। तसर्थ, पशु lethargic, बन्न सक्छ आफ्नो भोक गुमाउन।
उल्टी गरेर bile।
पखाला। को मल को रंग लगभग बेरंग वा खैरो छ।
निर्जलीकरण पखाला कारण। बिरालो अक्सर greedily पानी र पिउने सोध्छन्।
पूर्ण जिगर समारोह को विफलता अन्तस्करणले असर गर्छ। मूत्र कारण bile Pigments गर्न गाढा बन्न सक्छ। प्रयोगशाला विश्लेषण यसलाई मा प्रोटिन देखाउँछ।
जिगर मा पीडादायी गांठ। अंग वृद्धि र पीडादायी sensations गराउँछ। जनावर हातमा, hisses र बाइट्स दिइएको छैन।
रगतको जीव रसायन विश्लेषण असामान्य bilirubin देखाउँछ।
बिरालोहरु मा hepatitis को उपचार कस्तो छ? चिकित्सा चयन रोग को रूप मा निर्भर गर्दछ। तपाईं पहिलो कारण हटाउन पर्छ, जिगर को कामकाज असर गर्छ।
यो विषाक्तता आउँछ भने, यो आवश्यक detoxification छ। antidotes को सायद परिचय। अक्सर नसों नुनखरा आवश्यक छ। adsorbent एउटा सानो खुराक दिन सक्ने पाल्तु जनावर मालिक विषाक्तता को पहिलो संकेत मा (जस्तै, कार्बन सक्रिय)।
बी भिटामिन र gepatoprotektory क्षतिग्रस्त कलेजो को समारोह पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्न।
रोग को तीव्र चरण मा दुखाइ कम गर्न antispasmodics र analgesics सल्लाह दिन्छन्। सायद सानो खुराक मा "Drotaverinum" को प्रयोग। दबाइ एक डाक्टर, दबाइ, जनावर को वजन र अवस्थाको स्वागत प्रमाण दिइएको हुन सक्छ मात्रा गणना।
जब एन्टिबायोटिक भाइरल hepatitis प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूलाई Assigning सावधानी आवश्यक छ। कलेजो क्षति शायद अतिरिक्त उपचार सामना गर्न सक्नुहुन्छ। तर भाइरस मात्र केही लागूपदार्थ नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पाल्तु जनावर को स्वास्थ्य कायम राख्न र सेना immunomodulators लागू गरियो।
एक एलर्जी प्रतिक्रिया inducing सक्षम लागूऔषधको जटिल सेट। यस मामला मा, antihistamines निर्धारित।
अझ जस्तै लोकप्रिय उपचार को प्रयोग। तर कुनै पनि घर उपचार को कारण सम्बोधन बिना रोग सामना गर्न सक्षम छन्। chamomile र rosehip को शरीर मद्दत decoctions समर्थन। तिनीहरूले भिटामिन पूरक र antiseptics रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
डाक्टर एक आहार खाना नियुक्त गर्न आवश्यक छ। यसलाई कडाई गर्ने शासन पालन गर्न आवश्यक छ। उचित पोषण रोगग्रस्त अंग मा लोड कम गर्न मद्दत र पाल्तु जनावर स्थिति सुविधा हुनेछ। मा प्रारम्भिक दिन, सम्भवत, बिरालो खाना अलि पानी सीमित हुनेछ। अर्को, तपाईं porridge गर्न पाल्तु जनावर स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ। चामल, अनाज, दलिया, मेनुमा मुख्य पकवान हुनेछ। उबला मासु कम बोसो पदार्थ उपचार को सुरू भएपछि कुनै पहिले एक हप्ता भन्दा दिइएको गर्न सकिन्छ। तपाईंको पशुचिकित्सा संग लगातार परामर्श जान पशु फिड परिवर्तन गर्न चाहे अङ्कित गर्न मद्दत गर्नेछ।
यसलाई सधैं यो उपचार गर्न भन्दा रोग रोक्न सजिलो छ। पशु स्वास्थ्य होसियार ध्यान hepatitis जोखिम कम गर्न मद्दत गर्नेछ।
बिरालोहरु को खोप बेवास्ता नगर्नुहोस्। समय affixed Vaccinations बढावा प्रतिरक्षा मदत र जिगर मा बोझ कम।
त्रैमासिक नक्काशी पाल्तु जनावर कीडे निर्देशन अनुसार कलेजो मा लोड राहत हुनेछ।
Opisthorchiasis अनुपचारित कच्चा पदार्थ मा बिरालो प्रतीक्षा। तपाईं लगातार आफ्नो बिरालो कच्चा मासु वा माछा दिन भने करार को संभावना, धेरै उच्च छ।
खाद्य मात्र ताजा हुनुपर्छ। यो आवश्यक छैन तपाईं दिन को लागि छोड्ने छ भने, एक मार्जिन संग कप भाग आयातित छ। , Soured खाना विशेष गरी गर्मी, यो थप चोट गर्न सक्छन् पशु मालिकहरूको फिर्ती अघि एक सानो भोक छ भने भन्दा।
यसलाई समय समयमा पाचन प्रणाली समस्या छन्, विशेष गरी यदि फैटी खाद्य पदार्थ दिन आवश्यक छैन।
ठूलो हानि मात्र होइन कलेजो, तर पनि अन्य अङ्गहरू कारण एक निदान र सही औषधिको खुराक सम्भावित स्थापना बिना पशु उपचार। कुनै पनि तयारी मात्र पशुचिकित्सा संग परामर्श पछि आफ्नो पाल्तु जनावर दिन आवश्यक छ।
बिष को आकस्मिक प्रयोगबाट एक बिरालो सुरक्षित गर्नुहोस्। मल, औषधि र घरेलू रसायन एक उत्सुक पाल्तु जनावर गर्न बन्द मंत्रिमंडलों भण्डार झुक्किएर प्याकेजिङ्ग र प्रयास छैन पाउडर रोचक स्वाद च्यातेर। घर houseplants मा बोट, जनावर आफ्नो विषाक्तता लागि अनुरोध छ। के यो एक सुन्दर फूल बिना कठिन हुनेछ बच्न सक्नुहुन्छ, तर तिनीहरूलाई विष गर्न, पशु बचत गर्न।
fleas आफ्नो पाल्तु जनावर धुन वा छाला तयारी उपचार सावधान हुनुपर्छ। बिरालो आवश्यक गीला स्यान्डपेपर जिब्रो धुन हुनेछ। को शेष जनावर र कारण विषाक्तता को शरीर प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
सडक सक्दैन मा उपेक्षित जनावरको जारी। बिरालो परिवारको बेघर प्रतिनिधिहरु - जीवाणुहरू र भाइरस को उत्कृष्ट वाहक। तपाईं एक पाल्तु जनावर अझै पनि मालिकको आँखा बिना एक पैदल लिन निर्णय भनेर पत्ता लगाउन भने, तपाईंले एक पैदल पछि रूपमा हेर्न हुँदैन, र रोग को slightest साइन मा क्लिनिक जानुहोस्।
र यो hepatitis बिरालोहरु देखि मानिसहरूलाई प्रसारित छ त्यो सत्य हो? न यो रोग मानिसहरूलाई खतरनाक छैन। मानव hepatitis सी को Etiology पशु कलेजो रोग संग गर्न केही छ।
पनि उच्चतम अपघटन चरण कलेजो hepatitis पाल्तु जनावर मालिकसँग धम्की छैन। हुनत संक्रमण एक उपहार प्राप्त जोखिम अझै विद्यमान छ।
को पूर्वानुमान धेरै कारक निर्भर
लामो प्रत्यक्ष मनपर्ने फेद कसरी, यो मालिक आफ्नो हालत ध्यान कसरी प्रारम्भिक निर्भर गर्दछ। दुर्भाग्यवश, जनावर जीवनको आहार उचित उपचार र सख्त अनुपालन बिना चाँडै पर्याप्त अन्त गर्न सकेन।
अब तपाईं बिरालोहरु मा hepatitis कसरी प्रकट गर्न जान्दछन् कि, यो रोग को लक्षण, हामी वर्णन गरेका छन्। यस रोग र यसको उपचार को रोकथाम बताउनुभयो।
"Multifel-4": टीका को प्रयोगको लागि निर्देशन
पूर्वीय Shorthair बिरालो
सुन्दर Chromis: सामग्री, प्रजनन को विवरण
सल्लाह - एक बिरालो कसरी फसाउन
"राजा" मुसा। कति Jungar लोखर्के बसोबास?
वृद्ध छ - केवल उमेर। को व्याख्यात्मक शब्दकोश सङ्केत गर्दै
पत्रकार ओलेग Kashin: जीवनी, काम
"हास्य सख्त मोड": अभिनेता र भूमिकाको, चित्र कथा
सधैं जीवित कोठा लागि फैशन स्लाइड मा
Viktor Loginov: जीवनी, पेसा, व्यक्तिगत जीवन
Nikon D3100 - समीक्षा। क्यामेरा Nikon D3100
मोटरहाक्ने व्यक्ति टिप्पणी। ट्रंक कुन उपकरण राख्न?
कसरी लसुन तीर अचार गर्न विवरणहरू
यस पट मा के पकाएको गर्न सकिन्छ? जो आफ्नो दिल कामनाहरु!
Elyuminirovanie कपाल: सबै प्रविधि बारे
एक राम्रो तरिकाले पानी को विश्लेषण: मूल्य, प्रदर्शन र प्रयोगशालाहरुमा। राम्रो तरिकाले पानी को विश्लेषण कहाँ?